पेसागत आचरण र मर्यादा- विचार - कान्तिपुर समाचार
भ्रष्टाचार नरोके महालुट
भाद्र १४, २०७४ सुशीला कार्की
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश कस्ता कार्यक्रममा जाने भन्ने बहस छ । मलाई यस्ता कार्यक्रममा आउँदा आलोचना हुने हो कि भन्ने पनि छ । वास्तवमा पुस्तक विमोचनको निम्तो पाएपछि म सुरुमा अलिकति हच्किएको थिएँ ।
त्यसको कारण पनि छ । संविधानले पनि कानुनले पनि सबैतिर बाटो थुनेर हामीलाई एउटा मानव अधिकार आयोगतिर मात्र देखाएको छ । त्यहाँ एक जना हुने हो, सबै अट्ने कुरा आउँदैन । कहाँ के बोल्ने, के नबोल्ने । अस्ति डा। गोविन्द केसीजीकोमा यस्सो देखिएको थिएँ, समर्थन र आलोचना दुवै भयो । प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि के गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारे अस्पष्ट छ । कसैले गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कसैले गर्नुहुन्न भन्नु हुन्छ ।
हुन त काम गर्दै गइयो, महाअभियोग फेस गर्नुपर्‍यो । फेरि महाअभियोग लगाउनेहरूले नै फिर्ता लिए । जेसुकै भए नि मलाई त्यति दुस्ख लागेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा बस्ने प्रधानन्यायाधीश अथवा प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनबाट निष्कासित, जो प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश वस्तीजी, उहाँले अवसरै पाउनुभएन । धेरै कथा छन् । प्रधानन्यायाधीशहरूले, जसले सत्ताको वरिपरि अथवा जो बिहान–बेलुका चिया खान पुग्नु भो अथवा त्यहाँ उनीहरूको सम्झौता वा सहमति केही भयो भने त ठिकै छ । नत्र जसले इमानदारीपूर्वक न्याय दिन्छु भन्छन् ती सबैले (चुनौती र चेतावनी) फेस गरेकै हुन्छन् ।
प्रकाश वस्तीजीलाई कुनै एक चर्चित व्यक्तिले फोन गरेर कुनै मुद्दाको काम गरिदिन भन्यो । उहाँले सक्दिनँ भन्नुभयो । उहाँलाई त्यतिबेलै धम्की आयो कि, अब प्रधानन्यायाधीश बनेर हेर्लास् भनेर । तँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनेकहाँ चामल, दाल, घिउ त मैकहाँबाट जान्छ भनेर सम्म भनियो, त्यतिखेर । हामीलाई आश्चर्य लाग्यो, तैपनि कसरी प्रधानन्यायाधीश नबन्नुहोला भन्ने पनि लाग्यो । नभन्दै प्रमाणित भयो, उहाँ त्यो लाइनमा आउन सक्नुभएन ।
यहीं हुनुहुन्छ, कल्याण श्रीमान् (पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ), उहाँले एक दिन एउटा यस्तो फैसला गर्नुभयो, जहाँ हामी नै २-३ घण्टा रोकियौं सर्वोच्चभित्रै । बाहिर त अपरेसन वार । २-४ घण्टा त सडकै जाम । भ्रष्टाचारविरुद्ध फैसला थियो त्यो, धेरै दिनसम्म उहाँले त्यसको प्रतिक्रिया फेस गर्नुपर्‍यो । रामप्रसाद श्रेष्ठ श्रीमान् (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) एक दिन हर्रर आउनुभयो र मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए भनेको मान्नुपर्ने रे, नबनाए नबनाउनु भन्दिएँ भन्नुभयो । मैले पनि त्यही कुरा सुनुवाइका बेला भन्दिएँ । तीन महिनासम्म मलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएन, झुन्डयाएरै राखियो । अग्रजको शब्द सम्झिँदै मैले पनि सुनुवाइमा भने, ‘तिमीलाई बनाउन मन छ बनाऊ, नबनाए मेरो के जान्छ !’ यसरी सुनुवाइ पार गरेको थिएँ ।
यस्ता कुरा सबैले फेस गरेका छन् । प्रकाश वस्तीजीले एउटा सुनको थालमा धुप–नैवेद्य राखी लगेर चढाइदिएको भए उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुन्थ्यो, तर त्यो उहाँले गर्नु भएन । बहुत दुस्ख छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा थोरै हेर्नु भएन । उहाँको सकस मैले बुझेको थिएँ । म त दोस्रो पंक्तिमा थिएँ नि । यो देशमा म इमानदार बन्छु, म जनताको सेवा गर्छु, म घूस खान्न, अनियमित काम गर्दिनँ भन्न नपाइने देश । जसले सहयोग गर्नुपर्ने, त्यही व्यक्ति कालोपट्टी बाँधेर हिँड्छ । कस्तो देश हो यो ?
म निष्ठावान हुन्छु भन्दा त्यसको विरोध हुन्छ । म तपाईंहरूलाई भन्छु, यदि फटाहा, बदमास यो मुलुकमा कोही छन् भने लुगा लाउन नपाउने, झुत्रो लुगा लगाउने, खान नपाउने, गरिब, निमुखा होइनन्, हामी हौं हामी । पढेलेखेका नै हौं । हामीले नै फट्याइँ गरिरहेका छौं, अरू होइन । किनभने हामीलाई उपयुक्त लाग्यो, फाइदा हुने भयो भने ठिकै छ भन्छौं, विरोध गर्दैनौं । नत्र त हामीले भ्रष्टाचारको इन्च–इन्चमा विरोध गर्नुपर्ने होइन रु आज सडक बन्छ, एक झरी पानीले बग्छ । पुल बन्छ, एक रातमा भत्कन्छ । भ्रष्टाचार होइन रु जनताको राजस्व दुरुपयोग भएको कुरामा हामी बोल्दैनौं । हरिबहादुर थापाजीले त किताब ९रजगज० मा लेखेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले लेखेका कुरा सबै हामीलाई थाहा छ, सबै भएकै कुरा हो । उहाँले संहिताबद्ध गर्नुभएको हो । र, पढ्नलाई व्यवस्थित बनाउनुभएको हो । उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा दुईथरी फैसला हुनु भएन । एउटा ठहर्‍याउने, अर्को नठहर्‍याउने हुनु भएन । भ्रष्टाचारमा ठहर भएकालाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कानुन बन्ने पनि चर्चा छ । यसरी हँुदैन । भ्रष्टाचार रोक्न कडाइका साथ आउनुपर्छ । अदालतको फैसला पनि एउटा हुनुपर्‍यो । एउटा लाइनका छौं नि जस्तो प्रकाश वस्ती, कल्याण श्रीमान्, मलगायत । हामीलाई चाहिँ सराप्ने भए, एकथरी चाहिँ वाहवाही हुने भए । हुन त जनताले हामीलाई हेर्लान् । यी न्यायाधीशले भ्रष्टाचारविरोधी फैसला गरेका छन् भन्लान् । तर यसरी दुई खालको फैसला हुनु भएन ।
यो पुस्तकबाट धेरै कुरा उजागर भएको छ । भावी पुस्तासम्मले पढ्ने इतिहासका रूपमा आएको छ । यसले ९भ्रष्टाचारविरोधी० भावना जगाएर पनि ल्याउँछ । म त युवा पुस्तालाई भन्छु, अब सहेर बस्न हुँदैन । एक करोडमा १० प्रतिशतमात्र खर्च गरेर अरू चाहिँ तह–तहमा मिलेर लुट्ने रु यो त भएन नि । वास्तवमा हामी सिद्धिएकै भ्रष्टाचारले हो । हिजोअस्ति मैले एक जना राजदूतले यति राम्रो नेपाल के भएको होला भनी आश्चर्य मान्दै लेखेको पढें । प्रत्यक्ष नभनिए पनि भ्रष्टाचारले नेपाल बन्न नसकेको छनक थियो, त्यो लेख । एकथरीले सोहोरेर खानुपर्ने, अर्कोथरी भोकै बस्नुपर्ने, नाङ्गै बस्नुपर्ने, विदेशिनुपर्ने रु (विदेशमा) नोकरी गर्न जाँदा मृत्युको ट्याग बोकेर आउनुपर्ने रु यस्तो पनि हुन्छ ? यसरी सहन हुँदैन । त्यसैले म अनुरोध गर्छु, पुस्तकले मार्गदर्शन दिएको छ । हामीले भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै रूपबाट विरोध गर्नैपर्छ । गरेनौं भने अब यस्तो हुन्छ कि जसलाई जे गर्न मन लाग्छ, गर्छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, अर्काको घरमै गएर सम्पत्ति लुट्ने काम पनि सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, अर्को महालुटको रणसंग्राम हुन सक्छ । हामीले नियम, नीति, कानुन, विधिको शासनअनुसार काम गरेनौं भने मुलुक अन्धकारतिर धकेलिनेछ ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित ‘रजगज’ पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७४ ०७:३२